အူအတက်‌ရောင်ခြင်းကို သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ ၇ ချက် - Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 11/01/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အူအတက်ရောင်ခြင်းကို လူအတော်များများ ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသား ၉ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ အမျိုးသမီး ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အူအတက်‌ရောင်ခြင်းကို ဘဝမှာ တစ်ခါတော့ ခံစားဖူးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အူအတက်ရောင်ရာကနေ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခါ အူအတက်ပေါက်သွားနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက် လက္ခဏာတွေ ပြပြီး ၂၄ နာရီခန့် အချိန်ကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက် လက္ခဏာတွေကို သိရှိပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဆေးရုံကို အရောက်သွားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
၁. ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်း
အူအတက်ရောင်ခြင်းရဲ့ အဓိက လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အူအတက်ရှိရာ ဝမ်းဗိုက်ရဲ့ ညာဘက် အောက်ပိုင်းမှာ နာခြင်း အောင့်ခြင်း တို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စစချင်းအနေနဲ့ ချက်ပတ်ပတ်လည်မှာ နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းတို့ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ ဗိုက်ရဲ့ ညာဘက်အောက်ပိုင်းကို ရွေ့သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခြေထောက် သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်ကို လှုပ်ရှားတဲ့အခါ၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါတွေမှာ နာကျင်မှု ပိုပြီး ဆိုးလာတာကို ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
၂. နာကျင်မှုဟာ အချိန်နဲ့ အမျှပိုပိုဆိုးလာခြင်း
အူအတက်ရောင်ခြင်းကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဟာ အိပ်‌မောကျနေစဉ်မှာတောင် နိုးလာလောက်တဲ့အထိကို ဆိုးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာကျင်မှုဟာ လျော့မသွားဘဲ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာတင် ပိုပိုပြီးဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။
၃. ချမ်း တုန် ဖျား ခြင်း (low-grade fever and chills)
အူအတက်ရောင်ခြင်းကြောင့် အဖျားတက်တဲ့အခါ အဖျားမကြီးဘဲ 99°F (37.2°C) ကနေ 100.5°F (38°C) ခန့်လောက်သာရှိနိုင်ပြီး ချမ်းတုန်ခြင်းပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အူအတက်‌ရောင်ရာမှ ပေါက်သွားရင်တော့ အဖျားဟာ 101°F ကျော်သွားပါလိမ့်မယ်။
၄. ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားစားချင်စိတ်မရှိခြင်း
အူအတက်ရောင်တဲ့ အခါ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားစားချင်စိတ် လျော့နည်းခြင်းတို့ကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နဲ့ ပျောက်သွားရင် စိုးရိမ်စရာမလိုပေမဲ့ ရက်ကြာလေလေ ပိုပိုဆိုးလာလေဖြစ်ပြီး အဖျား နဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့ကိုပါ ခံစားရပြီဆိုရင်တော့ ဆေးရုံကို ပြေးသင့်နေပါပြီ။
၅. ဝမ်းချုပ်ခြင်းသို့ ဝမ်းပျက်ခြင်း
အူအတက်ရောင်တဲ့ လူနာတိုင်းတော့ ခံစားရလေ့မရှိပေမဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း အထူးသဖြင့် ဝမ်းသွားတဲ့အခါ အချွဲပါတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းလည်း နာတယ်၊ ဝမ်းလည်း ပုံမှန် မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါပြီ။
၆. လေပွခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက် မအီမသာဖြစ်ခြင်း
တစ်ရက်တစ်လေ အစားများလို့ အစာမကြေ၊ လေပွခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ရက်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ လေပွခြင်း ၊ လေမလည်ခြင်း တို့ဟာ အခြား‌အကြောင်းရင်းများကြောင့်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့ အဖျား၊ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း နာကျင်ခြင်းတို့နဲ့ပါ တွဲလာပြီဆိုရင်တော့ အူအတက်ရောင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အူအတက်ရှိတဲ့ ဝမ်းဗိုက် ညာဘက် အောက်ပိုင်းကို လက်နဲ့ ဖိထားပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ နာကျင်မှု ခံစားရခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆရာဝန်များ လူနာကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဘာသာမိမိ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ခံစားရပြီဆိုလျှင် ထပ်မစမ်းပါနဲ့တော့၊ ဆရာဝန်ဆီကိုသာ အမြန်ပြေးပါတော့။
အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်ပါတယ်။ အူအတက်ရောင်ခြင်းဟာ စောစောသိရင်၊ အူအတက်မပေါက်ခင် ဆေးရုံရောက်ရင် ခွဲစိတ်ကုသပြီး ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာလည်း အလွန်လွယ်ကူပြီး ယနေ့ခေတ်မှာ မှန်ပြောင်းနဲ့တောင် ခွဲစိတ်ကုသနိုင်နေတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကြောင့် အထက်ပါ လက္ခဏာတွေကို သိရှိထားပြီး အရေး ကြုံလာတဲ့အခါ မပေါ့မလျော့နဲ့ အချိန်မီ ဆေးရုံသွားရောက်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
Acute Appendicitis (ရုတ်တရတ်ပြင်းထန်အူအတက်ရောင်ခြင်း )